Iindaba - Izinto zokwenziwa
Ikhephu elenziweyo alifumaneki kwilaphu lehlobo lasehlotyeni, elenziwe ngezinto zeekhemikhali, livili lezinto ezingavuthiyo. Ilaphu le-chiffon elishwabeneyo-elinganyangekiyo lilungile, kwaye umzimba ongaphezulu unobuhle, isihombiso sendalo, imvakalelo epholileyo kunye nehlaziyayo, indlela yokunxiba ukuba mhle kangakanani.
Kodwa ilaphu le-chiffon kwinkqubo yokuvelisa ikwahlulahlulwe ngokomgangatho ophezulu kwaye iphantsi, ukhetho lokuxhomekeka kwisandla sokuchukumisa, ukubona ngamehlo akho, ungakhethi kakubi ukuze wonge imali, kufuneka uthenge umgangatho. Amalaphu e-chiffon aphantsi anxiba emzimbeni aya kuziva ukubila okuxineneyo kuhlala kulusu, ukugcwala kakhulu, amalaphu e-chiffon ekumgangatho ophezulu awuyi kuba nengxaki enjalo.
2. Ifayibha ehlaziyiweyo
Ifayibha ehlaziyiweyo iphefumlelwe ngumbungu wesilika, isebenzisa izinto zendalo njengezinto ezingavuthiyo, ukuqhubekeka ngemichiza kwisisombululo esixineneyo, emva koko kujikeleziswa inkqubo yokwenza ifayibha eyolukiweyo. Ngokumunca ukufuma okugqwesileyo kunye nokungena komoya, ngokuqinisekileyo yeyona fiber ikhemikhali ifanelekileyo ehlotyeni kwaye ayincangathi kwaphela.
3. Ifayibha yokwenziwa
Ifayibha yokufakelwa yicrafter esulungekileyo yemichiza, ekwabizwa ngokuba yi-polyester, nelilaphu eliqhelekileyo kwizambatho zasehlotyeni. Abantu abanesifo sokungavumelani nolusu banokuziva ukuba ukunxiba le nto kuya kubangela ukungonwabi kwesikhumba. Ngapha koko, uninzi lweefayibha ezikhoyo zepolyester ziyasebenza kwaye zintofontofo ngakumbi kunomqhaphu. Ezinye iimpahla ze-Uniqlo zikwasebenzisa iifayili zepolyester, ngoko akukho mfuneko yokukhathazeka malunga ne-allergies.
Xa uthenga iimpahla ehlotyeni, ngaphandle kokujonga isitayile, kubalulekile ukuba wazi ukuba ungayikhetha njani into efanelekileyo, elungileyo nefanelekileyo ukunxiba. Emva kokufunda eli nqaku, ndiyakholelwa ukuba kuya kufuneka ubenentliziyo ephantsi xa ukhetha iimpahla, awuzukukhetha okungalunganga.